China Lee-Thru / Abụọ Mirrorzọ Mirror factory na suppliers | Donghua
Ihe eji achọ uzo abuo, nke a na-akpo ihu-anya, onyunyo, uzo ma obu uzo ozo. Enyo a pụrụ iche na-enye gị ohere ịhụ site na ya ka na-egosipụta ìhè azụ. Maka onyunyo, ngwa pụrụ iche, Dhua See-Thru / Two Way Acrylic Mirror bụ ezigbo nhọrọ.
• Ọ dị na mpempe akwụkwọ 1220 * 915mm / 1220 * 1830mm / 1220x2440mm
• Dị na agba
• Omenala nha na ọkpụrụkpụ-dịnụ
Acryli Lee-Site Mirror, Lee-TNkechi/ Two-Way Mezighi ezi Akristal Sheet
Ihe eji achọ uzo abuo, nke a na-akpo ihu-anya, onyunyo, uzo ma obu uzo ozo. A ụzọ abụọ acrylic mirror e mere na a ọkara uzo transperent na acrylic, ikwe a obere ego nke merenụ ìhè site na-atụgharị uche ndị ọzọ. Dị ka acrylics niile, mpempe akwụkwọ a ga-adị mfe ịkpụ, guzobe ma mepụta ya.
Aha ngwaahịa Acryli See-Site Mirror, Lee-Thru / Abụọ-ụzọ Mirror acryli mpempe akwụkwọ
Agba Clear ma ọ bụ na agba
Nha 1220 * 915mm, 1220 * 1830mm, 1220 * 2440mm, omenala ịkpụ-to-size
Ngwa Onyunyo, nche, ogige anụmanụ
Akwụkwọ Dhua Acryli Mirror dị na agba dị iche iche.
Uzo abuo ma obu lee-site na enyo acrylic nwere ngwa na uru dị iche iche. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ụzọ iji mejupụta akwụkwọ acrylic ụzọ abụọ na azụmaahịa gị ma ọ bụ ụlọ gị.
Onyunyo Ulo oru
Izo Ihe Bara Uru
Nchekwa .lọ ahịa
2 ụzọ acrylic mirror mpempe akwụkwọ
acrylic 2 ụzọ enyo
acrylic 2 ụzọ enyo mpempe akwụkwọ
acryli mirror ụzọ abụọ
acrylic see-site na enyo
acryli uzo abuo
acryli uzo uzo uzo abuo
lee-site na enyo
ụzọ abụọ mirror
ụzọ abụọ mirror acrylic